SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Essential Diffuser Oil, China SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Essential Oil Scene Diffuser Manufacturer, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Tena ilaina menaka manitra Diffuser
500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Tena ilaina menaka manitra Diffuser
· FITAOVANA AROMATHERAPY: Ity diffuser menaka manitra ultrasonic ity dia fitaovana aromaterapy marolerapy multifunction tsy mitovy amin'ny hafa efa nampiasanao. Izy io dia misy fantsona lehibe sy mora diovina ho an'ny rano 500ml lehibe, loko jiro 7 samihafa, maody nebulizer zavona maro, ary koa switch-automatique azo antoka izay manakana azy tsy hanafana raha sanatria lany rano.
· Fahafahana lehibe ary manatsara ny kalitaon'ny rivotra: miaraka amina milimetatra 500, tsara ho an'ny efitrano lehibe io ary afaka hatramin'ny 16 ora ny fotoana fiasana. Ampiasao hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra sy ny rivotra ao an-tranonao, hanarona ny fofon'ny biby fiompy na fifohana sigara, ary hiarovana anao mianakavy amin'ny rivotra maina be, microorganisma, alergen ary maro hafa!
· BIR-PREMIUM QUALITY MATERIALS: Rehefa miresaka momba ny diffusers tena ilaina menaka manitra izahay, dia manapa-kevitra ny tsy hampiasa afa-tsy ny tavoahangin-jaza PP avo lenta, azo antoka, ary sariaka ara-tontolo iainana, ary avy amin'ny fanjakana. -ny fizotry ny famokarana sy ny fanaraha-maso kalitao henjana.
· HEVITRA FANomezana lehibe ho an'ny rehetra: Raha eny an-tsena ianao amin'ny fanomezana tsara sy azo ampiharina, azonao atao ny mijanona tsy mijery intsony. Ity diffuser menaka manitra aromatherapy lehibe ity dia fanomezana be saina sy mora ampiasaina, izay azon'ny besinimaro tombotsoa avy. Miaraka amin'ny fampiraisana ny endriny, ny endriny ary ny asany toa izany, dia fahatokisana azo antoka izany
différerant menaka manan-danja
adaptatera, kapoaka fandrefesana
Hazavan'ny alina malefaka sy mafana / Taratra miloko